I-Psychogenetics, ukuziphatha kakubi, i-genotype okanye indawo
Ukususela kubuntwaneni sibona abazali bethu, ukuziphatha kwabo, imikhwa, kwaye sele bekhulile, ngokuphindaphindiweyo baphinda baphinde baphenduke iimpazamo zabo.
Ukususela kubuntwaneni sibona abazali bethu, ukuziphatha kwabo, imikhwa, kwaye sele bekhulile, ngokuphindaphindiweyo baphinda baphinde baphenduke iimpazamo zabo. I-Psychogenetics yenzululwazi eya kukunceda ubone ukuba ngubani na othandayo olinganayo naye. Kule akhawunti, kukho iingcinga kunye namazwi: "Kwindlu nganye", "Ngaphantsi kwephahla ngalinye iigundane" kunye njalo njalo. Kuthetha ntoni? Ewe, ukuba impembelelo yokhokho kwixesha lethu liye laphawula ngaphambi kokuba kuvele ukuzalwa komnombo kunye nemfuza. Kwaye kuninzi kangangoko ngaphambi kokuvela kwengqondo ye-psychogenetics, oluhlobo lwe-fusion of genealogy and genetics. Nasi umzekelo: wena, ngokwenene, uqaphele ukuba kwiindawo zethu zoomama-encinane kakhulu-ngamanye amaxesha, ngokuqinisekileyo zixhamle ngomnqweno wokondla umntwana wazo. Ukuba umntu wasemzini ungqina ubungqina obunjalo, akakwazi ukuqonda ingcamango yoomama nogogo. Ingcamango yakhe ibonisa ukuba umntu akayi kufa ngenxa yendlala ecaleni kwesifriji esigcwele - isiseko sokuzimela ngeke sivumele. Ngoko ingqondo ye-psychogenetics ithi le mpawu yabasetyhini bethu iyiphumo "yesigidimi sokhokho" malunga nokungabikho kokutya, indlala, ukukhutshwa, ukukhutshwa, amaxesha emakhadi, ayenayo kwimbali yeSoviet. Ukwazi ingxaki, inokusombulula. I-Psychogenetics - ukuziphatha kakubi, i-genotype okanye imeko-siza kuphendula lo mbuzo kwinqaku.
I-Psychogenetics inokubaluleka kakhulu kumsebenzi wakho. Ngamanye amaxesha kukho, kwixesha elingaphambili, lifihla izizathu zokungaphumeleli kwakho kwangoku, ukungaqiniseki kunye ne-tab. Ingxaki kunye no-Angelina kukuba wayengenakuhlala phantsi ecaleni kompheki. Hayi, le ndoda ethandekayo, indoda enentsapho enomdla kunye nomphathi omhle akazange afune ukuphishekela i-economist yehlwempu. Kwaye i-economist, kwintlanganiso nganye, yaqala ukuphazamisa kwaye ikhangele epokothini yakhe ibhaluni ye-asthmatics. Ubungqina bendoda enobuqhophololo buyimqobo. Ngokwahlukileyo, intloko yendoda ka-Angelina yayinobubele, ihlazo, indoda yasekhaya. Kwaye iqhawe lethu likhululekile kwaye licolile, akazange akhumbule ukuhlaselwa kwesifo. Kodwa xa ufika kusebenza ... kwaye waqala. Ukuze umntu ahambe kumphathi, wayekulungele ukwenza nayiphi na imisebenzi eyongezelelweyo. Kwaye kuya kuqhubeka ixesha elide ukuba uAlinaina akazange awele phantsi nokuvuvukala okukhulu kwemiphunga. Kuhle ukuba umngane wam wamfumanisa isazi sezengqondo esaziwayo owayesilumkile kwi-psychogenetics. Wamnyanzela u-Angelina ukuba axoxe nazo zonke izihlobo zakhe aze aphakamise amaninzi amabali entsapho. Kuye kwenzeka ukuba unina wayeseyintombazana encinane yabona umdlalo weShakespearean ngokwenene: uyise, ngokulandelanayo, umkhulu ka-Angelina, enomona wenzalo wayekhe wancinca ugogo wakhe. Akuzange kwenzeke kwakhona, kungaphezulu, akukho mntu wayethetha ngalo. Unina ka-Angelina wakhumbula indlela yena ngokwakhe wayexhatshazwa emva kokuxabana nomyeni wakhe, umntu onamandla kwaye onamandla. Kodwa u-Angelina wathatha lo mbandela kwifa ngendlela ekhankanyiweyo.
Umntu ohamba naye uya kuthetha
Lungiselela ukuba zonke iimfihlelo zeentsapho zingashenxiswa ngokukhawuleza. Kodwa ukuba ubonisa umonde, uya kufunda ezininzi izinto ezithandayo.
• Zama ukuthatha umthi wentsapho.
• Fumana ukuba ngubani okhokho abaye bashiya iimbulana ezicacileyo, ngubani osapho okhutshiwe, ngubani ongumfel 'ukholo, onomntu onenhlanhla.
• Cinga malunga nesiphelo sakho esichazela iingxaki zakho zangoku.
• Ukuba kunokwenzeka, tyelela i-seminar ekhethekileyo "Ulungelelaniso Lwentsapho" ngokweendlela ye-Psychoanalyst Bert Hellinger. Le ndlela isekelwe kwimithetho yentsapho kunye nesini. Okubaluleka ngokukhethekileyo kukuba ngumsebenzi weHellinger kunye neembali zeentsapho ezibuhlungu. Eyaziwayo kakhulu kwilizwe lethu.
• Khumbula ukuba unokufumana ugqozi kwimbali yentsapho yakho. Ebomini, akukho nto ayinakwenzeka, kuba uvela kule ntsapho!
Unyango lwalukhuni kwaye ludla ixesha. Ngokwakhe isiseko umgaqo - kufuneka uzinike (ngengqondo okanye ngokwenene) isenzo esinqatshelwe kwaye ufumane umphumo omuhle. U-Angelina wacinga iziganeko ezivela kubomi beofisi kunye nokuthatha inxaxheba kumphathi kwaye ngokukhawuleza wakhumbula ixesha elimnandi lobomi bakhe, ezama ukuxhuma. Xa wayekwenzile, ukuhlaselwa kwesifo sokuxhamla kwanyamalala.
U-Eugene ukususela ebuntwaneni kwabonakala ngathi ihlabathi lonke lichasene naye. Wayebandezeleka ngenxa yokungabi nabulungisa kwabanye, kunye nokuzithoba kwakhe. Ngethuba elifanayo wayenentombazana engenazinkathazo, kwaye abantu abaninzi, beqala ngowesifazane ococekileyo eofisini, oogxa emsebenzini, ekugqibeleni kunye nabahlobo abasondeleyo, basebenzise oku. Xa u-Eugene waba nomdla kwimbali yentsapho, kwenzeka ukuba ugogo wakhe wayenabantwana abathandathu kwaye, ngokweengcamango zentsapho, wayengumntu onomusa, onomnene, wazama ukunceda wonke umntu kwaye enze ubomi bube lula. Umama u-Eugenia wayengumfazi wendlu kwaye ngelo xesha wabancedisa bonke ababaziyo: bahlezi, bahlala kunye nabantwana, baxakeka ekhitshini ngexesha lemizalwane engaqhelekanga. Kwathatha ixesha elininzi kwaye akazange azise ukwaneliseka, njengoko umama wayehlala exelela intombi yakhe. U-Eugene ngokwakhe uphinda ngokuphindaphinda imeko efanayo yentsapho esele isizukulwana sesithathu. Kulo bali, amava amaninzi adluliselwa ngamabali.
Ukuba uhlala unyanzelekile ukulimala kwasekhaya kunye neziganeko, hlalutya imbali yabazali bakho, oogogo nomkhulu, kunye nabo bonke abahlobo bakho abasondeleyo. Ziziphi iziganeko ezibi kunye ezingamnandi ebomini babo kwaye badlala indima ebalulekileyo? Ungazivumeli zibe ngumbhalo kunye nobomi bakho. Kodwa, ngenye indlela, mhlawumbi unomama onokuzithemba waya kumyeni wakhe ekude eSiberia, umntu unogogo owayengumhlolokazi, kodwa wafaka abantwana bakhe abathathu ngeenyawo zakhe-kunokuba asikho isizathu sokuphefumlelwa aze athathe umzekelo wobomi bakhe.
Indlela yokufumana ukuzithemba nokwahlukana kwezakhiwo
Indlela yokusindisa umntu othandekayo kwiinkqubo eziphantsi kobunzima
Ndizama ukuyisebenzisa, njani ukumelana?
Izizathu zengqondo zezobudlelwane bokuqala zesondo
I-Psychology: njani ungayithobeli ingqalelo
Indlela yokugcina ubudlelwane obuhle nabasebenzi emsebenzini
Indlela yokukholisa intombazana ukuba ifike ngomhla
Xa lixesha lokuphelisa ubudlelwane nomntu
Isonka kwisonka sezonka
Ukunyaniseka kwezonyango, imeko zokuphila
IHoroscope ngoFebruwari 2018 - umfazi-uAries - waseTamara Globa kunye no-Angela Pearl
VEGETABLE VEGETARIAN Diet
Ngaba i-cryomassage yentloko iyanceda?
Dessert ephuma kwi-watermelon
I-Pressotherapy ekulweni ne-cellulite
Ukukhulelwa okuninzi: iiwele ezimbini
Ukuba ufuna ukuqala i-aquarium neentlanzi
I saladi yamanzi
Yintoni enokuyilindela ukuba utyatywe yilungu ephupheni?
IHoroscope yempilo ngoFebruwari 2014
Inkukhu ye-Chicken kunye ne-broccoli kunye nomango
I-almond pie ne-kiwi
Izipho zokuqala zomntu othandekayo